Booliska jermalka Oo Ka Hadlay Qaraxii Lagu Qaaday Kooda Borussia+Cida Ka Dambaysay.
Friday April 21, 2017 - 19:38:59 in Wararka by RA_Wararka Caynaba News
Dortmund(CYN):Saraakiisha Booliska dalka Jarmalka ayaa dacwad ku soo oogay nin looga shakisan yahay inuu ka danbeeyay weerarkii lagu qaaday bas ay la socdeen kooxda Borussia Dortmund.
Ninkani ayaa la sheegay inuu ku lug lahaa arrimo ganacsi uuna quudaraynayay inuu lacag ka sameeyo haddii uu hoos u dhac ku yimaaddo qiimaha ay kooxdu ka joogto suuqyada saamiyada.
Booliska ayaa waxay intaas ku dareen in ninkan uusan wax lug ah ku lahayn kooxaha Islaamiyiinta xagjirka ah.
Sergej W. oo 24 jir ah ayaa waxa uu daganaa hoteelkii ay daganaayeen kooxdani kubada cagta isagoo ka daganaa qol ku sii jeeda goobta uu qaraxa ka dhacay, iyadoo labo ruux oo ay waxyeelo ka soo gaartay saddex qarax oo baska agtiisa ka dhacay ay u baahdeen dawayn.
Qaraxyada oo dhacay 11-kii bishan Abriil ayaa horseeday in dib loo dhigo ciyaar dhexmari lahayd Borussia iyo Monaco.
Booliiska ayaa markii hore ula dhaqmayay siddii fal argagixiso, ka dib markii goobta uu qaraxu ka dhacay agteeda laga helay waraaq tilmaamaysa inuu weerarku xiriir la leeyahay kooxda isugu yeerta Dawladda Islaamka.
laakiin baadhayaasha ayaa shaki wayn ka muujiyay in ujeedada weerarku ay ahayd jihaad doonnimo, iyadoo booliisku sheegay in ujeedada waraaqda loo dhigay ay ahayd marin habaabin iyo in dadku u qaataan inay ka dambeeyeen Kooxo islaamiyiin ah.